Dhismaha Jidka Muqdisho-Afgooye oo dar dar ku socota & halka haatan wax la marsiinayo + Sawirro | Hadalsame Media
Home Wararka Dhismaha Jidka Muqdisho-Afgooye oo dar dar ku socota & halka haatan wax...
Dhismaha Jidka Muqdisho-Afgooye oo dar dar ku socota & halka haatan wax la marsiinayo + Sawirro
(Muqdisho) 19 Agoosto 2020 – Waxaa beri dhowayd laamigii lagu bilaabay jidka isku xira Muqdisho iyo Afgooye oo qayb ka ah mashruuc ay Qadar maalgelisey oo sidoo kale lagu dhisayo jidka isku xira Muqdisho iyo Jowhar.
Dhismaha jidka isku xira Muqdisho-Afgooye oo hakad u galay cudurka karoonaha dartii ayaa beri dhowayd dib loo bilaabay, kaasoo uu dhismihiisu dhowaanahanba halkaa ka soconayay, wuxuuna haatan sii marayaa wadada Sar Kuusta isagoo dar dar fiican ku soconaya.
Waxaa is dhaaf dhaafaya gaadiidka qallaabiga ee iska rogaha loo yaqaanno, labbeellayaasha, kuwa laamiga kulul dhiijiya, iska rogayaasha sida jaayga iyo laamiga isku qooshan, cagafyada iyo wiishashka ku howllan dhismaha, qodista dhulka, qaadista iyo keenista carrada loo baahan yahay iyo midda meesha laga saarayo, iyadoo la doonayo in la dhiso jid laami ah oo casri ah oo laba saf oo cagsi ah leh oo uu midkiiba laba haad ka kooban yahay (two way street with two lanes each).
Dalka ayaa aad xilligan ugu baahan dib u dhiska kaabayaasha ay jidadku ka mid yihiin si ay dadku u helaan adeegyada ay xaqa u leeyihiin, waloow ay siyaasado ma dhalays ah, damac indha la’ iyo dagaallo micne darro ihi dalka ragaadiyeen.
Previous articleShirka Dhuusamareeb 3 oo ku NUXUR beelay hal kelmad oo uu yiri MW Farmaajo & 3 kurbo oo ka dhashay
Next articleMadaxwaynihii Mali oo si qoor qabad ah loogu khasbay inuu is casilo (Maxaa ka dhacay guriga wiil uu isagu dhalay?)